नेपालका टेलिभिजनहरुको पृष्ठभूमि र नयाँ ट्रेण्डका टेलिभिजनहरुको सम्भावना - [2008-08-17]
लोकतन्त्रसँगै नेपालमा एफएम रेडियोहरुको बाढी नै आएपछि अब टेलिभिजनको पनि बाढी नै आउँदैछ। मिडियाको यो गतिको विकासले नेपालमा राम्रो सन्देश दिएपनि मिडियाको भविष्य कसरी सुनिश्चित हुने भन्ने प्रश्नमा आशंका जन्मनु स्वभाविक नै हो। एफएम रेडियोहरुको तुलनामा टेलिभिजनको स्थापना आफैमा चुनौतीको विषय हो। टेलिभिजन स्थापना गर्न करोडौं रुपैया खर्च हुने गर्दछ। केही वर्षपहिले नेपालमा सरकारी स्तरबाट सञ्चालित नेपाल टेलिभिजनको एकछत्र राज थियो। अरु टेलिभिजनको स्थापनाको विषय एकदम जटिल थियो। दक्ष प्राविधिक तथा कर्मचारीहरुको न्यूनताको कारण टेलिभिजन खोल्ने विषयमा ठूला ठूला व्यापारी र उद्योगपतिहरु जिब्रो काड्थे। टेलिभिजनका लागि चाहिने उपकरण र स्रोत साधनको महगाईले गर्दा टेलिभिजन खोल्ने काम निकै जोखिमपूर्ण थियो। तर अहिले संसार प्रविधिको युगतर्फ ढल्किसकेकोले टेलिभिजनको स्थापना गर्न उति गाह्रो भने छैन। टेलिभिजन कसरी दिगो रुपमा चलाउने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छ।
नेपालमा लोकतन्त्र आएपछि मिडियाको दु्रतगतिमा विकास हुने क्रम जारी छ। मिडियाको विकासले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। पहिले पहिले घर घरमा बसेर मान्छेले नेपाल टेलिभिजन मात्र हेर्नु पर्ने बाध्यता थियो। तर अब आफूलाई मन परेको कुनै पनि नेपाली टेलिभिजन च्यानल हेर्न पाइन्छ। नेपाल टेलिभिजन नै नेपालको पहिलो टेलिभिजन च्यानल हो। त्यसपछि च्यानल नेपाल, कान्तिपुर र इमज देखा प194र्‍यो। इमेज च्यानलले नेपाल टेलिभिजनसँग डेढ घ48टाको समय किनेर टि.भी.प्रसारण गर्दथ्यो। तर पछि इमेजले २०६३ साल माघ ११ गते संचार मन्त्रालयबाट भू उपग्रह मार्फत देशभर आफ्नो प्रसारण पहुँचलाई बढायो। व्यापारी आर.के.मानन्धरको नाममा दर्ता भएको इमेज च्यानल काठमा48डौं उपत्यकामा भू सतही अर्थात टेरिस्टेरियल प्रणालीबाट सञ्चालित हुन्छ। इमेज बाहेक आर.के.मानन्धरले २०५९ वैशाख ४ गते साँग्रिला टेलिभिजन पनि दर्ता गर्नुभएको थियो। जुन टेलिभिजन पहिले नेपाल टेलिभिजनबाट दिवाकालीन प्रसारण सेवा मार्फत प्रसारित हुन्थ्यो। अहिले यो टेलिभिजन बन्द छ।
त्यस्तै उपत्यकामा प्रसारण हुने अर्को टेरिस्टेरियल टेलिभिजन हो कान्तिपुर। सुरुमा यो टेलिभिजन २०५९ साल वैशाख ४ गते उपत्यकामा मात्रै भूसतही प्रणालीबाट प्रसारण हुन लाइसेन्स लिएको थियो। पछि आएर २०६३ असार १ गते देशव्यापी पहुँच बढाउन भु उपग्रह प्रणाली मार्फत प्रसारण गर्न यो टि.भी.ले सरकार सँग लाइसेन्स लियो।
यसरी नेपालमा अहिले सम्म ४ वटा टेलिभजन मात्रै टेरिस्टेरियल र स्याटेलाइट दुवै प्रणालीमा प्रसारण हुन्छ। स्याटेलाईट प्रणाली भन्दा महँगो टेरिस्टेरियल प्रणाली हुन्छ। स्याटेलाइट प्रणाली केबुल प्रणाली मार्फत देशभर र विश्वभर हेर्न सकिन्छ। तर टेरिस्टेरियल प्रणालीबाट साधारण एन्टिनाको भरमा पनि टेलिभिजन हेर्न सकिन्छ। एकैदिन २०६० असार २९ गतेदेखि कान्तिपुर र इमेज संचालनमा आएपछि नेपाल टेलिभिजनको दोस्रो च्यानलको रुपमा २०६० असोज १० गतेदेखि मेट194्रो टेलिभिजन च्यानलले आफ्नो प्रसारण गर्न थाल्यो जसलाई एन.टि.भी २ भनेर नामाकरण गरिएको छ।
अहिले धमाधम टि.भी. स्टेशनहरु खोल्ने क्रम जारी छ। प्रजातन्त्र पुनः स्थापना पछि सरकारले अंगालेको खुला प्रसारण नीतिले नेपालमा पत्रपत्रिका,रेडियो, र टेलिभिजनहरुको विकासमा संख्यात्मक वृद्धि हुन थालेको छ। सुरुमा संचालनमा आएको निजी टेलिभिजन चाहिँ च्यानल नेपाल हो। २०५८ साल असार १९ गते च्यानल नेपालले भू उपग्रह प्रणालीमा प्रसारण आरम्भ गरेपछि नेपाली जनताले निजी टेलिभिजनको स्वाद लिन पाए। यो टेलिभिजन भू उपग्रह प्रसारण प्रणालीमा संचालनमा आएको पहिले टेलिभिजन च्यालन हो। यस टेलिभिजनका प्रमुख मालिकहरु जमिम शाह र बहादुर कृष्ण ताम्राकार ठूला व्यापारी हुन्। व्यापारी शाहको अ48डरवर्ल्डका कुख्यात डन दाउद इब्राहिमसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको समाचार केही वर्ष पहिले भारतीय टेलिभिजन च्यानल आजतकले प्रसारण गरेको थियो।
कस्ता कस्ता टेलिभिजनहरु आउँदैछन्?
नेपालमा हाल सम्म २० वटा टेलिभिजन च्यानलहरुले लाइसेन्स लिएका छन्। ती मध्ये नेपाल टेलिभिजन, च्यानल नेपाल, कान्तिपुर, इमेज, एन.टी.भी.२, सगरमाथा र एभिन्युज टेलिभिजन बाहेक अन्य १२ वटा टेलिभिजनहरु प्रसारण हुन बाँकी छन्। नेपालको बदलिंदो परिस्थिति सँगै नयाँ नयाँ ट्रेण्डका टेलिभिजनहरु भित्रिन लाग्दैछन्। छुट्टै पहिचान सहित संचालनमा आएको दुईवटा टेलिभिजन नै नेपालका फरक धारका टेलिभिजनहरु हुन्। सगरमाथा र एभिन्युज यी दुईवटा यस्ता टेलिभिजनहरु हुन् जसले २४ सै घण्टा समाचार र समाचारमुलक कार्यक्रमहरु मात्रै प्रसारण गर्ने गर्दछ। समाचार टेलिभिजन च्यानलका रुपमा एभिन्युजले पहिले नै लाईसेन्स लिएपनि प्रसारणका हिसाबमा सगरमाथा अगाडि आयो। हुन त यी दुवै टि.भी.एकैदिन २०६४ असार २७ गतेबाट प्रसारण भएका हुन् तर कुन चाँडो प्रसारण भएको भन्नेमा चाहिं घण्टाका हिसाबले सगरमाथा अगाडि देखिएको छ। भारतीय टि.भी.च्यानलहरुको प्रभावले नै नेपालमा यस्ता टेलिभिजनहरु भित्रिएको विज्ञहरु बताउँछन्।
सगरमाथा टि.भी.को दर्ता सुरुमा मिडिया होमका प्रमुख जीवन विष्टको नाममा थियो। तर आन्तरिक विवादको कारणले पछि जीवन विष्ट हटिसकेपछि हाल यस टेलिभिजनका प्रमुख व्यक्ति निर्मल गुरुङ रहेका छन्। संचालक गुरुङ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष हुन्। त्यसो त सगरमाथा टेलिभिजनका ४ जना लगानीकर्ताहरु सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु हुन्। कूल ५१ करोडको परियोजनामा संचालन भएको यस टेलिभिजनका संचालक गुरुङ राज्यको विकास सँग सँगै टेलिभिजनको पनि विकासको क्रमलाई हेरेर जनतालाई फरक स्वाद दिन यस्तो अवधारणाको टेलिभिजन ल्याईएको बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनको प्रसारण पहुच र गुणस्तरमा वृद्धि गर्न अझ केही उपकरणहरु ल्याउने तयारी भईरहेको गुरुङले बताए। यो टेलिभिजन संचालनमा आइसकेपछि लगानीकताहरु बीच केही खटपट चलेको थियो। यस टेलिभिजनमा लगानी गर्ने केही व्यक्तिहरु त बाहिरिएका थिए।
सगरमाथा जस्तै खटपट परेको अर्को टेलिभिजन एभिन्युज पनि हो। संचालकहरु बीचको आपसी मनमुटाव र आर्थिक कारणले गर्दा २०६० चैत ५ गते लाईसेन्स लिएको एभिन्युजले २०६४ सालमा आएर मात्रै प्रसारण आरम्भ गर्यो। यस टेलिभिजनका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार हुन्। नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) का पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका राजकर्णिकार हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तृतीय उपाध्यक्ष हुन्।
सगरमाथा र एभिन्युज जस्तै समाचारमुलक अर्को टेलिभिजन पनि नेपालमा संचालन हुदैछ।
पत्रकारिताको सिद्धान्त Accuracy, Balance & Credibility अनुसार नाम जुर्याईएको ABC टेलिभिजनले पनि २४ सै घण्टा समाचार र समाचारमुलक कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्ने यस टेलिभिजनका निर्देशक शुभशंकर कंडेल बताउँछन्। व्यवसायी संजय अधिकारीको नाममा दर्ता भएको यस ABC टेलिभिजनले २०६४ माघ २० गते संचालनको अनुमति पाएको थियो। यस टेलिभिजनमा लगानी गर्नेहरु अधिकांश बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका र कन्स्टक्सन कम्पनीका व्यक्तिहरु छन्। यस टेलिभिजनका निर्देशक शुभशंकर कंडेलका अनुसार यो टेलिभिजन करिव २५ करोड लगानीमा संचालन हुदैछ।
नेपालमा खुल्न लागेका केही टेलिभिजनहरु अधिकांश भारतीय टेलिभिजनको टेण्डरमा संचालित छन्। नेपालमा टि.भी.च्यानलहरु यति धेरै आउनु राम्रो भएपनि चलाउनलाई निकै धेरै कसरत गर्नुपर्ने निर्देशक कंडेलको धारणा छ। यहाँ त्यति ठूलो बजार नभएपनि यहाँको बजारले नेपाली टेलिभिजनहरु चलाउन सकिने निर्देशक कंडेलको भनाई छ। नेपालमा खुल्न लागेका केही टेलिभिजन च्यानलहरुले बिट अनुसारका कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्न लागेकाले विशेष रिर्पोटिंगको अवधारणा भित्रिन लागेको निर्देशक कंडेलको तर्क छ।
यसै गरी समाचार भन्दा भिन्दै मनोरंजनको दुनियाँमा रमाउनेहरुका लागि पनि नयाँ टेलिभिजन आउँदैछ। वरिष्ठ संगीतकार शम्भुजित बास्कोटाको अगुवाईमा आउन लागेको टेलिभिजनले दर्शकहरुलाई हर हमेशा मनोरंजन मात्रै प्रदान गर्नेछ। मनोरंजनात्मक र खेलकुद कार्यक्रम मात्रै प्रसारण गर्ने लक्ष्य राखेर प्रसारण हुन लागेको नमस्ते नेपाली टेलिभिजनले सरकारसँग गतवर्ष माघ २० गते लाइसेन्स लिएको थियो। संचार क्षेत्र सँग आबद्ध केही व्यक्ति र केही उद्योगी व्यवसायीहरुको पहलमा यस्तो नया अवधारणाको टेलिभिजन नेपालमा ल्याउन लागिएको यसका प्रमुख व्यक्ति शम्भुजित बास्कोटा बताउँछन्। सधैं एउटै खालको मिक्स टेलिभिजन च्यानल मात्रै नचल्ने भएकोले नयाँ शैलीको टेलिभिजन भित्र्याउँदा दर्शकहरुलाई भरपुर आनन्द दिन सकिने हुँदा यस्तो नयाँ अवधारणाको च्यानल ल्याईएको बाँस्कोटा
त्यस्तै विकास पत्रकारितासंग सम्बन्धित रहेर संचालनको तयारीमा रहेको मुनलाईट टेलिभिजन पनि नेपालमा आउन लागेको नयाँ टेण्डरको टेलिभिजन हो। नेपालमा इन्जिनियरिङ पेशा अंगालेका इन्जिनियरहरुको समूहले संचालन गर्न लागेको यो टेलिभिजन विकास निर्माणका गतिविधिसंग सम्बन्धित रहने टेलिभिजनका निर्देशक कृष्णप्रसाद शर्मा बताउछन्। दश करोड भन्दा माथि लगानी रहेको यो टेलिभिजनमा दश जनाको लगानी रहेको छ। नेपाल विकासको बाटो तर्फ उन्मुख भईरहेको बेला यस्तो टेलिभिजनको भूमिका र महत्व धेरै रहने निर्देशक शर्माको दाबी छ। विकास निर्माणका गतिविधि संगसंगै सूचना प्रविधिमा भईरहेको क्रान्ति र केही समाचार बुलेटिन पनि यस टेलिभिजनले प्रसारण गर्ने निर्देशक शर्मा बताउछन्।
नयाँ पत्रिका दैनिकका कार्यकारी अध्यक्ष स्नेह सायमी अर्थात रामकृष्ण मानन्धरको नाममा पनि टेलिभिजन दर्ता भएको छ। सिटिजन टेलिभिजन नाम राखेर दर्ता भएको यो टेलिभजनले २०६३ मंसिर १९ गते सरकारबाट लाईसेन्स लिएको थियो। तर टेलिभिजन कहिलेदेखि प्रसारणमा आउँछ त्यो कुरा स्वयं सायमीलाई पनि थाहा छैन। सायमी भन्छन् मेरो भाइले मेरै नाम राखेर दर्ता गरेको रहेछ तर प्रसारण कहिले हुन्छ भन्न गाह्रो छ। यो टेलिभिजनले समाचार र मनोरंजनका कार्यक्रमहरु मात्र प्रसारण गर्ने ल73य राखेको सायमीको भनाइ छ।
यी टेलिभिजन बाहेक न्युजलाईन प्रा.लि., नेशनल टि.भी., अपलिंक इन्टरनेशनल प्रा.लि., एभरेष्ट टेलिभिजन, बोधीग्राम प्रा.ल., एस.के.टि.भी., नोबेल ब्रोडकास्टिङ र तराई मिडिया नेटवर्क जस्ता टेलिभिजनहरुले लाईसेन्स लिईसकेका छन्। तर प्रसारण कहिले हुन्छ त्यो भन्न गाह्रो छ। सूचना तथा संचार मन्त्रालयबाट लाईसेन्स लिएको डेढ वर्ष भित्र टेलिभिजन प्रसारण गर्नुपर्ने नियम छ। भू उपग्रह प्रणाली मार्फत प्रसारण गर्नको लागि टेलिभिजन लाईसेन्स लिन साढे तीन लाख रुपैंया लाग्छ। यदि भूसतही प्रणालीबाट प्रसारण गर्ने हो भने प्रसारण क्षमता अनुसारको शुल्क लाग्छ।
सोचे अनुसार टेलिभिजन चलाउन नेपालमा गाह्रो छ। टेलिभिजन खोल्न करोडौं लाग्ने भएकाले विज्ञापनको मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। केही संचारकर्मीहरु विज्ञापन ल्याउन र पैसा उठाउन सके नेपालमा टेलिभिजन चलाउन गाह्रो नहुने बताउँछन्। तर केहीले भने नेपालको बजार व्यवसाय नै सानो भएकोले टेलभिजन चलाउन धेरै गाह्रो हुने बताउँछन्।
संचार मन्त्रालयका संचार विज्ञ एवं नेपाल टेलिभिजनका पूर्व महाप्रबन्धक तपानाथ शुक्ल टेलिभिजन खोल्नुभन्दा पनि यसलाई चलाउन निकै गाह्रो छ भन्नुहुन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा नाम कमाउने रहरले टेलिभिजन खोल्न व्यवसायीहरु हतारिएको संचारविज्ञ शुक्ल बताउँछन्। नेपालमा विज्ञापन बजारको विकास नभए बजारले टेलिभिजन धान्न नसक्ने शुक्लको तर्क छ। नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मुख्य साधन भनेको मिडिया नै हो त्यसैले मिडियाको विकासको लागि यो राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
खोल्न करोडौं लाग्ने तर विज्ञापन त्यति धेरै नआउने हो भने नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु फस्टाउन गाह्रो छ। नेपालमा उद्योग धन्दा, व्यापार,व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रहरु फस्टाउन सके मात्रै टेलिभिजन चल्ने अवस्था छ।
नयाँ पत्रिकाका अध्यक्ष स्नेह सायमी पनि अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रले टेलिभिजनलाई धान्न नसक्ने बताउनुहुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र नै सानो छ। नेपालका सबै टेलिभिजन च्यानलहरु केन्द्रीकरण भएर मात्रै चलिरहेका छन्। केन्द्रीकरण भएर मात्रै मिडियाको विकास हँदैन त्यसैले स्थानीय मिडियाको अवधारणा आउनुपर्छ र आर्थिक विकासमा ध्यान दिन सके मात्रै टेलिभिजन चल्ने छ सायमीको विचार छ।
विज्ञापन शुल्क पुरै उठाउने हो भने केही राहत हुने अवस्था
विज्ञापन बापतको पुरै शुल्क उठाउने हो भने टेलिभिजनका लागि केही राहत हुने अवस्था छ। तर विज्ञापन अनुसारको पैसा उठाउन सकिएन भने सबै कर्मचारी पाल्न र चल्न धौ धौ छ। करिव १ अर्ब लगानी रहेको नेपाल टेलिभिजनले गत वर्ष २४ करोड रुपैंया विज्ञापनबाट उठाएको थियो। त्यस्तै कान्तिपुरले १० करोड भन्दा माथि र इमेजले ५ करोडको हाराहारीमा गतवर्ष विज्ञापनको पैसा उठाएको थियो।
वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल पनि नेपालको विकास भए मात्रै टेलभिजनको विकास सम्भव हुने बताउँछन्। टेलिभिजनले राम्रो कल्पनाशील कार्यक्रमहरु दर्शकहरुलाई दिन सके विज्ञापन धेरै आउने र टेलिभजन चल्न सक्ने पत्रकार नेपालको धारणा छ। नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुमा आउने अधिकांश विज्ञापन भारतीय सामानकै हुन्छ। यहाँका टेलिभिजनले करिव तीसवटा नेपाली र विदेशी कम्पनीका विज्ञापनहरु मात्रै नियमित पाईरहेका छन्। ती सबै विज्ञापनहरु सबै टेलिभिजनलाई बाँड्दा अपुग हुने देखिन्छ। नेपालका बैंक, बिमा र वित्तीय संस्थाका विज्ञापनहरु प्रशस्त आउने हो भने टेलिभिजन राम्रै संग चल्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरुको विश्लेषण छ।
लेखक एभिन्यूज संग आबद्ध हुनुहुन्छ - सम्पादक